Dambiyada ku saleysan nacaybka Muslimiinta oo siyaaday | Somaliska
Sawirkaan waa haweeney Soomaaliyeed oo sanadkii hore lagu cunsuriyeeyay magaalada Tomelilla ee gobolka Skåne.
Dambiyada ku saleysan nacaybka Muslimiinta oo siyaaday
Warbixin uu soo saaray Gudiga ka hortaga dambiyada (Brottsförebygganderådet – BRÅ) ayaa lagu soo bandhigay in dambiyada ku saleysan nacaybka diimaha iyo jinsiyada ay hoos u dheceen sanadkii la soo dhaafay balse naceybka ka dhanka ah Muslimiinta uu siyaaday.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in dambiyada ku saleysan naceybka ee ka dhanka ah Yuhuuda iy Qaniisiinta ay hoos u dhacday balse kuwa Muslimiinta looga soo horjeedo ay siyaaday qaasatan gobolka Skåne ee koonfurta Sweden.
Dambiyadaan ku saleysan naceybka ayaa la sheegay in ay inta badan la xiriireen naceybka ajaanibta ama cunsuriyada. Gudiga soo saaray warbixinta ayaa sheegay in dambiyo badan oo ku saleysan nacaybka aan la soo gaarsiin booliiska.
Inta badan maxkamadaha ayaan wax ka qaban dambiyada ku saleysan nacaybka jinsiga ama diinta taasoo ay gudiga warbixinta soo saaray ku sheegeen aqoon la’aan.
Nacaybka ka dhanka ah Muslimiinta ayaa walwal ku haya dad badan oo ku dhaqan Sweden iyo Yurub daafeheeda oo sanadihii ugu dambeeyay ay soo bexeen ururo barnaamijkooda ka dhigtay aflagaadeynta iyo been abuurka laga sameeyo diinta Islaamka iyo Muslimiinta. Ururadaas waxaa ka mid ah ururka SD ee ka dhisan Sweden oo caadeystay been abuurka Islaamka iyo qaasatan bulshada Soomaalida.
Barafkii oo ka bilowday Sweden
Nin aflagaadeeyey oday Soomaaliyeed oo 6 bilood oo xarig ah lagu xakumay
Zakaria Hersi oo qabsaday Nigeria
July 3, 2011 at 14:11
Waan filan karnaa wax kastaba inay nagu yimaadaa ileyn wadankeenii Hooyo ma joognee waana u toog haynaa wax kastaba inay dhacaan waaa in loo dulqaataa.
Waa wax aad Loo Filaayay in AY dhacaan . Maxaa yeelay Warbaahinta ayaa Qaladkaa leh.
Rag aan isla shaqayno , ayaa markaan uga sheekaayay in aan Islaam ahay aad u yaabay.
Waxaana u sheegay Islaam iyo Muslim in aysan isku mid ahayn sida .
Sverige iyo Svenska u kala duwanyihiin.
Waxaan ku dhahay , Muslim danbi haddii uu galo , Islaamka Danbi malahan .
Tusaale haddii Svenska haddii danbi sameeyaan , Sverige waa dalkii qalad malahan.
Walalaayaal aan dadka Tusno , wanaaga Islaamka.
Maxaa yeelay Dagaal ba’an ayaa Islaamka lagu jiraa dhanka Warbaahinta.
wad salaman tihiin dhamaan asxbta ku xeran somaliska .com iyo wallalkey jimcale jimcalow walaal waxan ku weydiin lahhaa su aal ka baxsan muwduucan oo ah arinta socdaalka waxan ethiopia ka maqley in qofka wax xareysanaaya in uu keensado Epasspor oo laga gadayo safarada dhexdeeda markaan weydiiyeyna waxey igu dhaheen safaarada sweden iyo safaaradaha kaleba wey isla qabaan mida kale xitaa cunuga yar xitaa passpor ayaa laga raba arintaas ma maqashey oo wax jira oo dowlada ogtahey miyaa mahadsanid
July 3, 2011 at 21:06
jimcaalow jawaab ban ka sugaya waxa aad kala socoto bro
Asc walaal inta aan la socdo waligeed Sweden soomaalida baasaboor ayay u direysay balse ma aqoonsana baasaboorada Soomaalida ama Epassport ha ahaado ama kii hore ha ahaado. Waa wado caadi ah oo dadka ay mariyaan in ay baasaboor waydiiyaan waxay yiraahdan waxay adkeyneysaa kiiska qofka balse cadeyn ma ahan.
Ma jiro sharci cusub oo ka soo baxay dowlada Sweden inta aan ogahay oo ku saabsan arintaan.
July 3, 2011 at 21:33
TO”WALAALKEN.JIMCALE?fadlan hadii.ay.macqul tahay su.aasha sxbken omar jawabteda wan wada daneynena mahadsanit
July 3, 2011 at 21:41
qabashada codsiga dalbashada ayey ku xireen in lala yimaado passka epasspor ooay ku keceyso lix boqol dollar marka manoo weydiinkartaa dadka dowlada u dhaw oo taqaan adiga si hadii ay jirto arinta aan u ogaado waayo dadkii naga horeeyey ayaa xujo looga dhigey pls jawaab ayan kaa sugaa balan ayan leenahey goor dhaw mahadsanid
Way jirtaa arintaa waana sida aad u sheegtay. Horey ayaan u waydiinay sababta ay dadka ugu diraan baasaboor aan qiimo lahayn waxayna noogu jawaabeen qiimihiisa waa in uu adkeeyo kiiska qofka balse cadeyn ma ahan. Sidaa ayay u dalbadaan. Waana arin aan dhowr jeer ku celcelinay markaan la kulanay sababta ay dadka lacagta ugu qasaarinayaan balse waxay ku doodayaan in loo baahanyahay baasaboorka.
Marka qofka asaga ayaa la rabaa in uu ka fikiro. Aniga waxaa ila haboon in aad kiiskina dib u dhigataan ilaa go,aan rasmi ah ka soo baxayo Dowlada Sweden waayo hada waxaaa xitaa na soo gaaraya in dadkii sharciga la siiyay ay dabagal ku hayso laanta Socdaalka oo ay racfaan ka dalbatay maxkamadii go,aanka gaartay.
July 3, 2011 at 21:48
asc asxbtay wlhi waa caqab hor leh oo nagu soo korodhey in anagoo joogna sweden hada aan la socono in aysan jirin isbedel dowlada xageeda ah oo ku sabsan arinta passporka hada ay tiraahdo safaarada sweden qofkii wax xareysanaaya waa inuu la yimaadaa passporka E layiraahdo oo hadane kaaga sii daranee la sheegayo in aad ka iibsaneysid safaarada dhexdeeda wlhi waa bistoolada hoo adiga lee madaxa iska toogo oo micnaheedu yahey hadii aan loo sameyn xaaska ay tahey isku dhac waa yaab wad mahadsan tihiin
July 4, 2011 at 22:16
asc walal jimcaale waxaad nosheegtay in dad sharci lasiiyey ay laanta socdaalku racfaanka kadal batey marka dadkaas ma waxay jogaan sweden gudaheeda mise africa?
July 5, 2011 at 16:47
Wadankan ma lehin ta iska dhaadhiciya.Marti beynu ku nahay, soomaliduna dadka loogu neceb yahy bey noqdeen.Muslinimu ka sako, dad madow beynu ah o bila ixtraam iyo nathaam ah.Anigu waxaan iin oran beenta iyo khiyaamada joojiyo oo risqiina o kalaha oo xoogina shaqaysta.